Vavaka ho an'ny alika marary. ? Mivavaha amin'ny finoana ary ampio ny namanao ho sitrana.
Ny vavaka ho an'ny alika marary. Io alika izany dia sakaizan'ny olombelona indrindra, tsy isalasalana. Mitondra fifaliana sy fihomehezana mahafinaritra ho an'ny fianakaviana izy ireo. Saingy indrisy, tsy ny voninkazo avokoa no zava-drehetra. Amin'ny zavamananaina, marary ihany koa izy ireo, mila fikarakarana ary miteraka fiahiahiana.
Ny vavaka ho an'ny alika marary dia hampitony anao sy ny ankohonanao amin'izao fotoana famoizam-po izao. Ny alikanao koa dia noforonin'Andriamanitra ary noho izany dia hotahiany aminy raha mangataka azy amin'ny finoana sy ny fahatokiana ianao.
Ireto misy vavaka vitsivitsy hanampy ny namanao kely tsy hahatsapa fanaintainana sy hanasitranana haingana kokoa.
1 Ny vavaka ho an'ny alika marary
2 Ny vavaka fanasitranana biby marary
3 Vavaka amin'ny Fiarovana biby
4 Vavaka entina hanasitranana biby
5 Ny vavaka ho an'ny alika marary dia manasitrana
6 Vavak'i Saint Francis an'ny Assisi ho an'ny marary marary.
Ny vavaka ho an'ny alika marary
“Ry Ray any An-danitra, ampio izahay azafady amin'ny fotoana ilainay. Nataonay mpiandraikitra ny (anarana ho an'ny biby) izahay. Raha sitraponao dia avereno sorena ny fahasalamanao sy ny herinao.
Mivavaka ho an'ny biby hafa sahirana ihany koa aho. Enga anie izy ireo hitondrana fikarakarana sy fanajana izay mendrika azy rehetra.
Isaorana anie ianao, Andriamanitra Andriamanitra, ary masina ny anaranao mandrakizay doria. Amen.
“Ry Tompo malala, narary ny sakafoko sy ny mpiara-miasa amiko (anarana). Izaho dia mifona ho anao, mangataka fanampiana anao ho anay amin'izao fotoana ilana azy izao.
Mangataka am-panetren-tena aho mba ho tsara sy ho mpitari-dalana ho an'ny biby fiompy toy ny teo amin'ny zanany rehetra.
Enga anie ny tsodranonao dia manasitrana ny sakaizako mahafinaritra ary hanome anao andro mahafinaritra maro izay ahafahantsika miara-miasa.
Enga anie hotahivina sy ho sitrana isika amin'ny ampahany amin'ny famoronana fitiavana. Amen!
Ny vavaka fanasitranana biby marary
«Andriamanitra Tsitoha, Izay nanome ahy ny fanomezana hamantatra amin'ny zavaboary rehetra izao rehetra izao taratry ny hazavan'ny fitiavanao; fa nankininao tamiko, mpanompo manetry tena ny hatsaram-panahinao tsy manam-petra, ny fiambenana sy ny fiarovana ny zavaboary amin'ny planeta; Avelao aho, amin'ny alàlan'ny tanako tsy tonga lafatra sy ny fahitako ny olombelona voafetra, ho fitaovana ho an'ny famindram-ponao masina hianjera amin'ity biby ity.
Amin'ny alàlan'ny tsiranoka tena ilaina aho dia afaka mamofona anao ao anaty rivotra misy angovo aho, ka hihena ny fahorianao ary averina amin'ny laoniny ny fahasalamanao.
Enga anie ho tanteraka amin'ny sitraponao izao, amin'ny fiarovana ny fanahy tsara manodidina ahy. Amen!
Vavaka amin'ny Fiarovana biby
“Ho an'ilay Andriamanitra Ray be famindram-po, izay namorona ny zavaboary rehetra mipetraka ao amin'ny planeta, mba hahafahan'izy ireo miaina mifanaraka amin'ny olona, ​​sy ny Anjeliko mpiambina, izay miaro ny biby rehetra miara-mipetraka amiko eto amin'ity trano ity.
Mangataka aminao am-panetren-tena aho hijery ireo biby tsy manan-tsiny ireo, manalavitra ny ratsy rehetra ary mamela azy ireo hiaina am-pilaminana sy am-pilaminana mba hahafahan'izy ireo mameno fifaliana sy mitia amin'ny androko rehetra.
Enga anie hilamina ny nofinao ary enga anie ny fanahinao hitarika ahy any amin'ny sehatry ny hatsaran-tarehy sy ny fandriampahalemana amin'ity fiainana zarainay ity.
Vavaka entina hanasitranana biby
«Arkanjely Ariel, izay nomen'Andriamanitra fanomezana hikarakara ny biby rehetra,
Arkanjely Raphael, izay nahazo ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ny fanasitranana, mangataka aminao aho mba hanazava izao fotoana izao ny fiainan'ity lehilahy mamy ity (lazao ny anaran'ny biby).
Enga anie ny famindrampon'Andriamanitra hamerina ny fahasalamany, mba hahafahany manome ahy indray mifaly amin'ny fanatrehany sy ny fanokanana ny fitiavany.
Avelao aho, amin'ny alàlan'ny tanako sy ny fijeriko ny olona voafetra, ho fitaovana ho an'ny fitiavan'Andriamanitra hamehy anao ao anaty rivo-piainana mavitrika, ka hiharatsy ny fahorianao sy hitombo ny fahasalamanao.
Enga anie ho tanteraka amin'ny sitraponao izao, amin'ny fiarovana ny fanahy tsara manodidina ahy. Amen.
Ny vavaka ho an'ny alika marary dia manasitrana
Ry Ray any an-danitra ô, ny fifamatoran'olombelona amin'ireo namanay avy amin'ny karazany hafa dia fanomezana mahafinaritra sy manokana avy aminao. Ankehitriny mangataka aminao aho mba hanome ny biby anay ny fikarakaranao manokana ny ray aman-dreny sy ny hery manasitrana hanafoanana ny fijaliana mety ananany. Omeo anay, ny namanao olombelona, ​​ny fahalalana vaovao momba ny andraikitray amin'ireo zavaboarinao ireo.
Matoky anay izy ireo rehefa matoky anao izahay; Ny fanahintsika sy ny azy ireo dia miara-miaina eto ambonin'ity tany ity mba hanangana fisakaizana, fitiavana sy fitiavana. Raiso ny vavaka ataontsika am-pahatsorana ary fenoy hazavana sy hery ny biby mararyo na mijaly mba handresena ireo malemy rehetra amin'ny vatana. Tompoko, ambarako manokana ny filànanao (lazao ny anaran'ny biby).
Ny hatsarany dia mifamatotra amin'ny zavamananaina rehetra ary ny fahasoavany dia mikoriana amin'ny zavaboariny rehetra. Ny fanahintsika dia misy angovo tsara, hikasika ny tsirairay avy amintsika amin'ny taratry ny fitiavan'izy ireo.
Omeo fiainana manokana sy salama tsara ireo namanay. Omeo fifandraisana tsara amin'izy ireo izahay, ary raha manapa-kevitra ny hanaisotra azy ireo ny Tompo dia manampy antsika hahatakatra izy ireo fa tsy miaraka amintsika intsony izy ireo, fa manatona kokoa ny Tompo. Omeo ny vavaka ataontsika amin'ny fanelanelanan'i Saint Francis an'i Assisi tsara, izay nanome voninahitra anao tamin'ny zavaboary rehetra. Omeo azy ny hery hiambenana ireo namanay biby mandra-pahatongan'izy ireo antoka miaraka amin'ny Tompo mandrakizay, izay antenainay hiaraka aminy mandrakizay. Amen.
Vavak'i Saint Francis an'ny Assisi ho an'ny marary marary.
“San Francisco feno voninahitra, Masina amin'ny fahatsorana, fitiavana sy fifaliana.
Any an-danitra ianao dia misaintsaina ny fahatanterahan'Andriamanitra tsy manam-petra.
Jereo tsara izahay.
Ampio izahay amin'ny ilainay ara-panahy sy ara-batana.
Mivavaha amin'ny Rainay sy Mpamorona anao mba hanomezany anay ny fahasoavana angatahinay amin'ny fanelanelanana ho anao, izay efa namanao hatrany.
Ary ampio ny fontsika hitombo fitiavana an'Andriamanitra sy ireo rahalahintsika, indrindra fa ireo izay mila izany.
San Chiquinho malalako, apetraho eo aminao io anjely io (lazao ny anaran'ilay biby) mila anao! Mahalala ny fitiavanao, henoy ny fangatahanay.
Masindahy Francis an'i Assisi, mivavaha ho anay. Amen.
Ankehitriny fantatrao ny vavaka ho an'ny alika marary, koa mianara vavaka mivavaka amin'ny biby marary.
Vavaky mahery mba hahatrarana fahasoavana ary hahatanteraka ny fanirianao lalina indrindra
Mivavaha am-bavaka mba hahita namana iray sy miaina tantaram-pitiavana
Ianaro ny vavaky ny famelan-keloka ara-panahy